PUBG Mobile Hacks Android Hacks acks Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
PUBG Mobile IZIKHUNGO ZE-Android
I-Gamepron ihlinzeka ngama-PUBG Mobile Android hacks amahle kakhulu ku-inthanethi, nakho konke okufanele ukwenze ukuthenga ukhiye womkhiqizo. Ukufinyelela kokuphamba okungcono kakhulu kwe-PUBG Mobile namuhla!
Usuvele uthenge iPUBG Mobile Android Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-hacks wethu we-PUBG Mobile Android, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kubuyekezwa noma liseseku-inthanethi Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu I-PUBG Mobile Android Hacks
I-PUBG Mobile Android Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, i-Wall Hacks nokuningi
Thenga I-PUBG Mobile Android Hacks in 4 izinyathelo
Khetha i-PUBG Mobile kusuka emidlalweni ehlukahlukene enikezwa ku-Gamepron
Ukulinganisa izidingo zakho umgomo wethu! Khetha i-hack elingana nabo ngokuphelele kwi-Gamepron
Yenza zonke izinkokhelo zakho usebenzisa izindlela zethu zokuqinisekisa ezivikelekile nezingu-100%
Lapho usuthengile ukhiye wakho womkhiqizo, thola ukufinyelela kuma-PUBG Mobile cheats wethu bese ulanda!
Kungani i-Gamepron PUBG Mobile Android hacks?
I-Gamepron iletha umhlaba wokugenca ungene endaweni entsha, njengoba sizama ukuthuthuka ngokwezinga lomkhakha abasebenzisi abaningi abahlobene namathuluzi abo. Ngenkathi ungahle uzibuze ukuthi ungasizakala kanjani uma udlala iPUBG Mobile, i-Gamepron inesixazululo osilangazelelayo - besilokhu sinikeza abasebenzisi bethu ama-PUBG Mobile cheats aphezulu selokhu sethulwa. Ngenkathi abahlinzeki abaningi be-hack behluleka ukufeza izethembiso zabo, siyinhlobo ehlukile lapha eGamepron! Ungathembela kithi ukuthi silethe maqondana nekhwalithi yamathuluzi ethu, kanye nokwesekwa kwamakhasimende ethu (into evame ukunganakwa ngenkathi izama ukukopela ku-PUBG Mobile). Uma unanoma yiluphi uhlobo lwezinkinga ezihlotshaniswa nama-hacks wethu we-PUBG Mobile, ithimba lethu lokuxhaswa kwamakhasimende lizoliphatha ngokushesha ngangokunokwenzeka!
Izici ezitholakala kulokhu kukopela zingesinye isizathu sokuthi kungani ungafanele ucabange nokuthenga amathuluzi akho kwenye indawo. Ukushiya izinto zenzeke ngengozi nje akulungile emhlabeni wokugenca, njengoba ukusebenzisa okukhohlisayo okungalungile kwe-PUBG Mobile kuzokwenza ukuthi uvinjelwe. Zonke izici zethu zenzelwe ukwenziwa ngezifiso, okunikeza abasebenzisi umuzwa owenziwe waba ngowakho uma kukhulunywa ngokukhohlisa kwePUBG Mobile. Ngeke silinge ukukukhawulela ekusebenziseni into eyodwa noma ezimbili noma, uthola ukufinyelela okuphelele kuthuluzi uma usuthenge ukhiye womkhiqizo!
Abathuthukisi i-Gamepron esebenza nabo njengabalingani bazoba abahamba phambili kuphela ngoba ukuphela kwendlela yokugcina izinga eliphezulu kangaka lama-hacks. Mhlawumbe uyaqaphela ukuthi kunezindlela eziningi ezingabizi kakhulu uma kukhulunywa ngePUBG Mobile cheats, futhi kukhona nezinketho zamahhala online - hhayi lawa mathuluzi kuphela azokwenza ukuthi uvinjelwe, kepha angaba nokuqukethwe okunonya okufihliwe ngaphakathi!
Ezokuphepha yinkinga enkulu kuningi labathuthukisi be-hack, ngoba abakwazi ukuthola ukuthi bangabagcina kanjani abasebenzisi babo bephephile. I-Gamepron isebenzise ukuvikelwa okuphelele kokulwa nokukhohlisa, okusinika amandla okucisha umlilo emnyangweni wezokuphepha. Akudingeki ukuthi ubheke njalo ehlombe lakho futhi ulungise izilungiselelo zakho zokugenca nge-Gamepron, njengoba amathuluzi ethu engatholakali ngo-100%, futhi kunezinye izinto eziningi ezisetshenziselwe ukuqinisekisa ukuthi abantu abaqapheli ukuthi uyakopela. Labo ababheka ukukopela kwe-PUBG Mobile bangaphumula kalula, njengoba ekugcineni uthole i-oasis!
I-PUBG Mobile Android Wall Hack (ESP)
Imininingwane ye-PUBG Mobile Android Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
I-PUBG Mobile Android Item ESP enezihlungi
I-PUBG Mobile Android Aimbot
I-PUBG Mobile Android izexwayiso zesitha
Imodi ye-PUBG Mobile Android super jump (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe).
PUBG Mobile Android bone & aim key okulungisekayo.
Isinxephezelo sePUBG Mobile Android Recoil
Impela I-PUBG Mobile Android Hack Izici
I-PUBG Mobile Android Player ESP
I-PUBG Mobile Player ESP ilusizo uma ufuna ukugcina amathebhu kuzitha zombili nakubalingani beqembu, njengoba uzokwazi ukuzibona ngaso sonke isikhathi.
Imininingwane Yomdlali i-ESP isici esizokwazisa imininingwane ebalulekile ehlotshaniswa nabadlali (njengamagama abo, ukubalwa kwezempilo, ngisho namabanga).
Usebenzisa into yethu ye-Item ESP (enezihlungi) ikuvumela ukuthi uphange ku-PUBG Mobile ngezinga elisebenza kangcono, ugweme kalula impango ethathwa njengongenamsebenzi.
Ama-Aimbot agcinwa ehlonishwa kakhulu ngesizathu esizwakalayo! Nge-PUBG Mobile aimbot yethu, akekho umuntu oMhlaba ozokushaya ngesikhathi kuqhuma isibhamu.
I-PUBG Mobile Android Bullet track (isebenza ngamabanga amafushane naphakathi)
Landelela isibhamu sakho phakathi nezimpi ezimfushane naphakathi nebanga ngokusebenzisa isici se-Bullet Track esitholakala ku-PUBG Mobile Android cheat yethu!
Izexwayiso zesitha ziyatholakala uma usebenzisa le nkohliso, okusho ukuthi umyalezo uzoboniswa esikrinini noma nini lapho abaphikisi besondelene (okubeka usongo).
Imodi ye-PUBG Mobile Android super jump (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe)
Imodi Ye-Super Jump izosusa ngokuphelele ukulimala kokuwa, ikuvumela ukuthi uwe ngomusa (futhi ngaphandle kokukhathazeka ngokufa, kunjalo!).
PUBG Mobile Android bone & aim ukhiye okulungisekayo
Uzokhetha ukuthi ithuluzi lisebenza kanjani, njengoba lifaka ithambo futhi lihlose izinketho zokhiye ongazilungisa. Khetha lapho ufuna i-aimbot uzidubulele khona!
I-PUBG Mobile Android aimbot ihlola amasheke aimbot abonakalayo
Amasheke abonakalayo asetshenziselwa ukugcina ukunyakaza kwakho kungokwemvelo ngenkathi ukukopela ngoba i-aimbot ngeke ikhombe abadlali abangekho ekubukeni kwakho.
Zisuse ungalulami ngokuphelele! Isuse emdlalweni ngokusebenzisa i-Recoil Compensator yethu, etholakala kuphela ku-PUBG Mobile Android cheat.
Yize ama-hacks athile eshibhile, awekho azohlangabezana nezinga lezinga eligcinwe lapha eGamepron. Lapho ufuna ukuba ngumdlali ohamba phambili ku-PUBG Mobile, konke okumele ukwenze ukuthola ukufinyelela kuzikhohlisi ezinhle kakhulu. Thenga wena ukhiye womkhiqizo namuhla bese uthola ukuthi kungani abasebenzisi abaningi beqhubeka nokuthembela ku-Gamepron ngazo zonke izidingo zabo ze-PUBG Mobile hack.
I-PUBG Mobile Android Hacks kanye nama-Cheats
Njengoba ithandwa njengoba iPUBG Mobile isibe, azikho izikhohlisi ezithembekile ezanele laphaya ukugcwalisa isidingo. Ngokujabulisayo, i-Gamepron ekugcineni ingena esenzweni - lapho ufuna amathuluzi athandwa kakhulu womdlalo othandwa kakhulu, usuyazi vele ukuthi siyindawo ongethembela kuyo. Awekho amathuluzi wethu aklanywe ngenzuzo engqondweni, futhi yilokho okwenza ukukopela kwethu kukhetheke kangaka. Awusoze waba nesipiliyoni esibi lapho ukhetha ukusebenzisa i-PUBG Mobile Android hack yethu, njengoba silipholishe leli thuluzi kaningana. Hhayi nje kuphela, kepha siyazi ukuthi ama-PUBG hacks angaduma kanjani, ngakho-ke sihlale sibuyekeza ukukhishwa kwethu ukuqinisekisa ukuthi uthola inguqulo enhle kakhulu.
Ungadlali ngemali yakho ngokukhetha ukukopela nabanye abahlinzeki, konke abazokwenza ukuthatha imali yakho bakudumaze. Beka ukholo lwakho ku-Gamepron futhi kuzokhokha.
Ukusebenzisa i-aimbot yethu yeselula ye-PUBG kuzokusiza uwine ngezindlela ezingaphezu kweyodwa, kepha uzodinga ukuthenga ukhiye womkhiqizo ukwenza kanjalo (njengoba uzokwazi ukufinyelela okungcono kakhulu kwe-PUBG Mobile cheat etholakala online manje!) . Ama-Hacks angafika ezinhlotsheni eziningi ezahlukahlukene, kufana nanoma yini enye empilweni; yingakho kungabalulekile ukukhomba umhlinzeki othembekile ngokushesha okukhulu. I-Gamepron ifake i-PUBG Mobile aimbot ku-hack yethu ye-PUBG Mobile ye-Android ezokwenza konke okuhle okukhishwe njengamanje, futhi okuwukuphela kwento ezothuthukisa phezu kwayo kungaba ukubuyekeza kwethu okulandelayo!
Unokufinyelela kuzici eziningi, njenge-FOV Circle, Smooth Aiming, Auto-Fire / Aim, Bone Prioritization, nokunye okuningi! Uzokwazi ukwenza ngendlela oyifisayo ukuthi i-aimbot izosebenza kanjani, ngakho-ke uzobe udlala isipiliyoni sokugenca esenzelwe wena uqobo (ngokungahambisani nokuhamba nje ngamasethingi ejwayelekile, asazosebenza!).
I-PUBG Mobile Android ESP neWallhack
Ukusetshenziswa kwePUBG Mobile ESP yethu kanye neWallhack kujwayelekile ngesizathu, ngoba lezi zici zizokunikeza ukubuka kwemephu ongakaze ube nayo ngaphambili. Lapho ungabona zombili izitha nabalingani beqembu ngokusebenzisa izindawo eziqinile, kwesinye isikhathi kungaba nzima. Lapho usufunde ukugaya imininingwane (njengamagama, amabanga, ezempilo, izikhali, izikhali, njll.) Futhi uthole ukuthi ngubani ozohlasela kuqala, ungasebenzisa iPUBG Mobile Android ESP ukuze uhlale uchuma. Kuzohlala kunechibi labadlali abasha abalungele ukuqedwa ngabasebenzisi beGamepron, futhi iPUBG Mobile aimbot yethu yenza leyo nqubo ibe ulayini kanye.
Akunasidingo sokuzijwayeza noma ukuchitha amahora ebhodini uzama ukucija amakhono akho ngoba ungavele ulande ukukopela kwethu kwe-PUBG Mobile bese uthola umphumela ofanayo. Isikhathi siyimali, ngakho-ke ungazihluphi ngokuchitha noma isiphi isikhathi ngokuzijwayeza futhi vele uthenge ukhiye womkhiqizo we-PUBG Mobile hack yethu.
Unyawo luyisici esizokuvumela ukuthi ubone amathrekhi ezitha, unikeze abasebenzisi ithuba lokuzilandela nokuzikhipha. Lokhu kulungile uma ufuna ukuhlala endaweni enenzuzo, kepha ungafuni ukulahlekelwa umbono wezitha zakho - ungavumela nebanga ukuthi ubone ukuthi usondele kangakanani kulitshe. Lokhu kukusiza ukuthi ugweme noma ikuphi ukumangala okudingekayo, ngoba uzohlala wazi indawo okukhona kuyo isisulu sakho! I-footprint yisici esisanda kwakhiwa ngozakwethu, futhi siyaziqhenya ngokuthi ekugcineni sizokunikeza ekukhohliseni kwethu kwe-PUBG Mobile. Ukulimala Okuphakeme ngesinye isici okufanele usicabangele, njengoba abanye abahlinzeki bengeke bakunikeze le nketho.
Ukulimala Okuphezulu kungavulwa ukuze i-aimbot igxile kuphela ezingxenyeni zomzimba ezibaluleke kakhulu kwelitshe lakho, okuvamise ukuba yinhloko nesifuba. Akudingeki ukhathazeke ngokuhlangana nabadlali abanekhono!
Amanye ama-PUBG Mobile Android Hacks and Cheats
Akunasidingo sokucabanga ukuthi indawo yokwamukela izivakashi igcwele yini “ukujuluka” ngoba noma bekwazi ukulingisa i-aimbot (okungenzeki), i-High Damage izobakhipha. Izici ezingeziwe ezihlotshaniswa ne-PUBG Mobile hack yethu azitholakali kwenye indawo, futhi zinikeza ukuthinta okukhethekile okwenza amathuluzi ethu ahluke kakhulu kunaningi. Ama-Snaplines nama-PlayerBoxes azokuvumela ukuthi ukhombe futhi ubhekise imininingwane yakho
izitha ngokufanele, ngenkathi i-Player Information ESP ingasetshenziswa ukubona imininingwane ethe xaxa kuzinhloso zakho. Bobabili abadlali bodwa nabadlali beqembu bangazuza kuleli thuluzi, ngoba alisho lutho ngesimo; uzohlala usizakala lapho usebenza neGamepron.
Ngenkathi abanye abasebenzisi be-hack bezabalaza ukwakha ubudlelwane nomhlinzeki wabo we-hack, sinikeza insizakalo yamakhasimende emangalisayo nezici ezingatholakali kwenye indawo. Kungakho singumhlinzeki we- # 1 we-PUBG Mobile hacks online ngoba senza konke esingakwenza ukuze sithuthukise kulwazi lwamakhasimende ethu.
I-PUBG Mobile Android Hacks Imibuzo
Kungani amagama ethu we-PUBG Mobile Android Hacks65
Sebenzisa i-PUBG Mobile Android hack yethu ukuze ube nenzuzo ngaso sonke isikhathi, noma ngabe uqhathanisa nobani. Kungenzeka ukuthi udlala iqembu lochwepheshe abaqinisekisiwe futhi akunandaba, njengoba amathuluzi ethu enamandla kakhulu ukushaya! Awusoze wachitha imali lapho uthenga ama-PUBG Mobile cheats kwaGamepron, lokho kuqinisekile.
Kungani iPUBG Mobile Android Aimbot yethu
Sebenzisa i-PUBG Mobile aimbot yethu ukuthola okuningi kumdlalo! Akudingeki ukuthi uthandaze ukuthi uzobagwema bonke abadlali abanekhono endaweni yakho yokwamukela izivakashi, njengoba sizoqinisekisa ukuthi uzinqoba zonke izingxabano zakho nePUBG Mobile Android aimbot. Khetha bese ukhetha lapho ufuna i-aimbot ikhombe khona, ngoba uzoba nokulawula okuphelele nge-hack yethu ye-PUBG Mobile.
Kungani iPUBG Mobile Android ESP yethu
I-ESP imele “Ukuqonda Okungeziwe Kokuqonda”, futhi kufana nokungeza umqondo wesi-6 kugeyimu yakho. Uzokwazi ukubona izinhlaka zabadlali nezinye izinto eziguqukayo ngenkathi udlala, konke lokho kungabonakala ezindaweni eziqinile. Ungathola nempango enhle kakhulu ngempango yethu ye-ESP, unikeze abadlali amandla okubona izinsiza ezibalulekile ngezindonga.
Kungani iPUBG yethu yeselula ye-Android Wallhac
Ukusebenzisa i-wallhack kuzokuvumela ubone izitha zilungiselela ukukuqamekela ngezindonga nakwezinye izindawo eziqinile / ezi-opaque. Imidlalo ye-Battle royale igcwele amaqembu azimisele ukudlala kusetshenziswa i-META (Iqhinga Eliphumelela Kakhulu), futhi kwesinye isikhathi uzodinga i-stellar PUBG Mobile wallhack ukuzikhipha. Ungalokothi ufe ukuqamekela lapho lesi sici sisebenza!
Kungani i-PUBG Mobile Android Norecoil yethu
I-Recoil iyona eguquguqukayo eyodwa abadlali abaningi abazovuma ngayo ukuthi iyacasula, njengoba kuhloselwe ukwehlisa ukunemba kwakho. Yize kungokoqobo, asifuni ukuthi abasebenzisi bethu babhekane nayo ngenkathi bedlala iPUBG Mobile. Ngokujabulisayo, sisebenzise inketho ye-stellar NoRecoil ngaphakathi kokukhohlisa kwethu kwe-PUBG Mobile Android. Akunandaba ukuthi isibhamu sikhulu kangakanani, uzobe udubula uqonde kunanini ngaphambili ngeGamepron!
Ungalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu we-PUBG Mobile Android?
Landa konke okungcono kakhulu kwe-PUBG Mobile cheats khona lapha eGamepron, okuwukuphela kwensizakalo ezinikele ngokuphelele kumsebenzisi. Abanye abahlinzeki be-hack bazokwenza inqubo yokulanda ibe yisicefe noma bakuphoqe ukuthi uzifake ngokwakho - I-Gamepron inenqubo yokulanda / yokufaka ezenzakalelayo ngokuphelele, ikunike isikhathi esithe xaxa sokuhlala uphumule. Cabanga ngazo zonke lezo zinzuzo ezingaba khona!
Kungani ama-PUBG Mobile Android hacks wakho abiza kakhulu kunamanye?
Ukukopela kwethu kwe-PUBG Mobile kuhluke kakhulu kunezinye ngomqondo wokuthi sinikela ngenani elilinganiselwe lama-slots nganoma yisiphi isikhathi. Abasebenzisi bethu abalwi bodwa ukusebenzisa ithuluzi, kepha sinenani elilinganiselwe lamaslack akhona - amathuluzi ethu nawo awatholakali ngokuphelele futhi ngeke akwenze uvinjelwe. Singasho ukuthi lokho kukodwa nje kuwufanele kakhulu amanani!
Sinemikhawulo yesikhathi ezolingana nezidingo zanoma yimuphi umdlali, kungakhathaliseki izinga lekhono lakho. Noma ngabe ufuna ukubona ukuthi ukugenca kungokwakho yini, noma ungathanda ukufinyelela isikhathi eside, ungathenga ukhiye womkhiqizo ngokufanele. Sibanikeza ngezinsuku ezi-1, amasonto ama-1, nezinketho zenyanga engu-1, okunikeza abasebenzisi bethu ukuguquguquka okuphelele lapho besebenza neGamepron. Ungaphuthelwa yilawa ma-PUBG Mobile hacks amangazayo!
Awesome I-PUBG Mobile Android Hack Izici